Fampitokana-monina ny mpandeha :: Hiara-hiasa amin’ny trano fandraisam-bahiny ny fanjakana • AoRaha
Fampitokana-monina ny mpandeha Hiara-hiasa amin’ny trano fandraisam-bahiny ny fanjakana
Hiditra amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo sehatra tsy miankina, tahaka ny trano fandraisam-bahiny ny fanja­kana malagasy amin’ny fana­raha-maso ny fahasalaman’ ireo mpandeha fiaramanidina, teratany vahiny na Malagasy, miditra eto Madagasikara.
Tsy voatery ny olona rehetra avy any ivelany no hampidirina eny amin’ny hopitaly Anosiala fa ireo nahitana soritr’aretina ihany. Manomboka feno ny hopitaly, etsy Anosiala, noho ny hamaroan’ ny olona atoka-monina eny. Efatra ambin’ny folo ny hopitaly natokana handraisana an’ireo olona ahiahiana mitondra ny “Coronavirus” eto Madagasikara.
“Mandra-pahita ny toe­rana hafa ankoatra ny hopitaly hametrahana an’ireo olona natoka-monina ireo dia eny Anosiala ihany aloha. Nisy naoty nosoniavin’ny minisitera telo mangataka ny sehatra maro, ao anatin’izany ny trano fandraisam-bahiny, mba hanome toerana hahafahana manao fanaraha-maso ireo olona tazonina mandritra ny efatra ambin’ny folo andro. Tsy ampy handraisana ny olona rehetra ny eny Anosiala”, hoy ny Dr Lamina Arthur, tale kabi­netra ao amin’ny minisite­ran’ ny Fahasalamam-bahoaka.
Tontosa, tetsy Ambohidahy omaly, ny fifanaovan-tsonia ny famatsiam-bola mitentina 3,7 tapitrisa dôlara avy amin’ny Banky iraisampirenena ho an’ny minisiteran’ ny Fahasalamam-bahoaka, izay harotsaka ao amin’ny kita­pom-bolan’ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (OMS). Entina manamafy ny fiarovana ny tsy hidiran’io valanaretina io eto Madagasikara izany vola izany. Eo koa ny fanamafi­sana ny fampitaovana sy ny fano­fanana ny mpiasan’ny faha­salamana hahafahantsika mandray an-tanana an’ireo marary raha sanatria ka tafiditra eto amitsika ny « Covid-19 ».
Naneho fahavononana hifehy ny valanaretina ny minisitera. « Tsy mbola misy trangana « Coronavirus » eto amintsika saingy mila mitandrina sy mailo. Olana ny enti-manana teo aloha satria tsy nanana fitaovana ireo seranan-tsambo sy ny seranam-piaramanidina sasany. Izany indrin­dra no anton’izao fanampiana izao ho fanamafisana ny fana­raha-maso sy ny fitliana ara-pahasalamana eny amin’ireo seranana”, hoy ny minisitra Ahmad Ahmad.
Nanapa-kevitra ny kaompaniam-pitaterana an’haba­kabaka nasionaly Air Mada­gascar fa hanitatra ny fampiatoana vonjimaika ny sidina mampitohy an’i Madagasikara amin’i Shina, mandra-pahatonga ny 30 jona 2020 raha toa ka tokony ho tapitra tamin’ny 30 avrily 2020 izany, araka ny fanambaràna omaly. Noho ny aretina « Coronavirus » mbola miha­naka be no anton’izao. Nandray fepetra ho an’ireo mpandeha efa nanao famandrihana ka tafiditra anatin’io fe-potoana io ; na ahemotra amin’ny daty hafa ny famandrihana na haverina manontolo ny vidin’ny tapakilany.
Fanajariana ny eto an-drenivohitra :: Mitohy ny fifampiresahana amin’ireo mponina amoron’ny lakandrano C3